Indasitiri nhau - Nhau - Shenzhen Wudongfang Tsika Kutaurirana Nha. Co., Ltd. - Page 2
Imba > Nhau > Indasitiri nhau
Iyo yakasarudzika hunhu iwe yaunofanirwa kuziva mune ye ballet kirasi
Ballet inyanzvi yekushongedza inotsungirira kwenguva yakareba. Nekuda kwemagariro, nhoroondo uye zvetsika zvinhu, ballet ine yayo seti yezvinodiwa kubva mupfekero kusvika kune hunhu, izvo kune imwe nhanho zvakare zvinoratidza kutsvagisa uye kutsvaga kwekunakisa kwerunako mune ballet art.
Ndeapi marudzi akasiyana emaTutu masiketi?
Tutu, pamusoro pekuudza hunhu, inobvumira vateereri kuti vazive pakarepo dema dema kana runako rwekurara, asiwo inovaka mafambiro emutambi, chimiro chayo chinotsigira chimiro cheballet.
Ndeipi iyo iplate-senge rokwe rakapfekwa na ballerina
Vakati vaida kuyedza kuona ballet, asi vakatya kuti havaigona kuzvinzwisisa uye vazvikoshe.
Ballet troupe: kuunza yakakwira art mukati inosvika
Kana zvasvika kune ballet, nderipi izwi rekutanga rakakosha rinouya mupfungwa? Yakanakisa, isinganzwisisike, uye nekuwedzera "kusanzwisisika", uku ndiko kufunga kwekutanga kwevanhu vazhinji.
Nei iwe uchipfeka sutu "yechinyakare" kutamba ballet?
Ini ndinofunga musikana anoda United States aifanira kuve akafungidzira kuti rimwe zuva anogonawo kupfuudza chena bouffant ballet siketi, chena ribhoni dhanzi bhutsu, akasunga rakakwirira bhuru musoro, anotaridzika zvakanyanya akanaka uye akanaka!
"Ballet" yakatanga kuItari uye ikabudirira muFrance. Izwi rekuti ballet rinobva mukuturikirwa kweChirungu kweFrench ballet, zvinoreva "kutamba" kana "kutamba." Ballet pakutanga yaive mhando yekutamba yaiitwa nevanhu vazhinji kuti vazvivaraidze kana zvikwere muEurope.